Qaramada Midoobay oo Warka Soo Xaaladda Botswana. | Hargeysa World~Herald
Qaramada Midoobay oo Warka Soo Xaaladda Botswana.
UncategorizedQaramada Midoobay oo Warka Soo Xaaladda Botswana.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dowladda Botswana ay qaaday tallaabo muhiim ah oo lagu cidhibtirayo in hooyadu ay ubadkeeda u gudbiso fayraska HIV.
In kasta oo dalka Bostwana uu weli yahay mid ka mid ah waddamada adduunka ee uu sida ba’an u saameeyay fayraska HIV/AIDS, haddana khubaradu waxay sheegeen in heerka uu haatan waddankaasi ka gaadhay yareynta in hooyadu ay fayraskaasi u gudbiso ilamaha ay tahay arrin aad u wanaagan.
Hay’adaha Qaramada Midoobey ee WHO iyo UNAIDS ayaa suurtagalnimada tallaabadaasi Botswana ku sheegay in ay ku timid sanado badan oo dalkaasi ay ka jirtay hoggaan siyaasadeed oo aragti fog leh iyo siyaasado caafimaad oo hufan, arrimahaasi oo si weyn u yareysay tirada carruurta ku dhasha fayraskaasi.
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa horumarkaasi Botswana ku tilmaantay guul weyn oo u soo hoyatay waddankaasi oo ka mid ah waddamada adduunka ee uu faraha ba’an ku hayo cudurkaasi.